Rubatsiro mushure mekushaya basa: rubatsiro rwaunogona kukumbira | Ehupfumi Zvemari
Kusava nemabasa haisi mamiriro ezvinhu anofadza. Kana iwe uine rombo rakaringana rekugamuchira iro rinopa rekushaikwa kwemubhenefiti mwedzi mushure memwedzi, iwe unozonzwa zviri nani zvishoma sezvo, iwe uchinge wawana basa nyowani, une "cushion" yekurerutsa matambudziko. Asi pane rubatsiro here mushure mekuramwa? Kana iwe wave kuda kupedza bhenefiti, zvakajairika kuti unotanga kutya, kunyanya kana usati wawana basa.
Asi iwe unofanirwa kuziva izvozvo kune rubatsiro mushure mekushaya basa, chero bedzi iwe uchizadzisa izvo zvinodiwa. Iwe unoda here kuziva izvo zvavari? Nhasi tinotsanangura mhando dzakasiyana dzerubatsiro kune vasina mabasa varipo.
1 Inobatsira yekushaikwa kwemabasa
2 Batsira mushure mekushaya basa
2.1 Rubatsiro mushure mekushaya basa: Inoshanda yekuisa mari
2.2 Rubatsiro rwevanhu vanopfuura makore makumi mana nemashanu ekuberekwa
2.3 Rubatsiro mushure mekushomeka kwevanhu vanopfuura makore makumi mashanu nemaviri ekuberekwa
2.4 Kushaya basa
2.5 Kunoshamisa kushaya rovha kubatsirwa (SED)
2.6 Imwe rubatsiro mushure mekushaya basa
Inobatsira yekushaikwa kwemabasa
Kubatsira kwekushaikwa kwemabasa kunozivikanwa zviri nani se "kushaya mabasa", uye mubhadharo unobhadharwa kwauri kupera kwemwedzi kunyangwe usina basa, nekuti iwe wakambopa kuti uigamuchire. Kunyanya, zvinonzi, kune gore rega rega rakashanda, iwe une mwedzi mina yekushaya basa, nenzira yekuti, zvichienderana nekuti wave nenguva yakareba sei, inoenderana zvakanyanya kana zvishoma.
Rubatsiro urwu rwunogamuchirwa zvinoenderana nechako mupiro, pasina zvekuwedzera kana chero chinhu chinowedzera muhoro wako pawakange uchishanda. Nekudaro, uye sezvatakataura, haina muganho, asi ine nguva yekutendeseka uye, mushure meizvi, iwe waizomira kuchaja, ungave kana kuti wawana basa.
Dambudziko nderekuti vanhu vazhinji vanounganidza kushaikwa kwemabasa havaipedze uye vatove nebasa (kana kumbomira nekuti vaiwana); Neichi chikonzero, kana bhenefiti iyi ichinge yapera, vanonzwa kusakwanisa nekuti, maitiro ekurarama kana pasina mari?
Neraki kune zvimwe zvinobatsira mushure mekushayikwa kwemabasa, pamwe kusazivikanwa zvakadaro, Asi ivo vanogona kukubatsira kurerutsa iro dambudziko iwe uchiramba uchiedza kuve unoshanda mumusika webasa zvakare.
Iyo yekupedzisira-yekushaya basa mabhenefiti maturusi aunogona kuzvishandira iwe nawo kana, kana iko kwekushaikwa kwebhenefiti kwapera, iwe uchiri usati wawana basa rekuve nemubhadharo pakupera kwemwedzi.
Nekudaro, iyo State Employment Service, iyo SEPE, inopa akateedzana erubatsiro rwekuti kushaya basa kunopera. Uye izvi zvinotevera:
Rubatsiro mushure mekushaya basa: Inoshanda yekuisa mari
Zvirinani kuzivikanwa nechidimbu chayo, RAI, ndeimwe yemabhenefiti iwe aunogona kukumbira chero bedzi iwe uchizadzisa izvo zvinodiwa. Kuti utange, Iwe unofanirwa kunge uri pasi pemakore makumi matanhatu nemashanu ekuberekwa. Uye zvakare, iwe unofanirwa kunyoresa sewe unotsvaga basa paSEPE, zvinoreva kuti vanogona kukushevedza kuti uite mabvunzurudzo emabasa kana kuenda kumakosi ekudzidzisa.
Uye haugone kuve nemari yemwedzi pamwedzi inopfuura 75% yeiyo yepasi mibairo yekudyidzana.
Une murume / mukadzi kana / kana vana vari pasi pemakore makumi maviri nematanhatu ekuberekwa (kana vakwegura vakaremara), vana vari mudare rekurera ... saka mari yese yemhuri inofanira kuwedzerwa uye, nekudaro, haingapfuuri 26% yeSMI.
Ruyamuro urwu rucharambwa kana iwe wakambobatsirwa narwo kare (ndiko kuti, gore rapfuura), kunze kwekunge uri nyajambwa wechisimba chevakadzi kana munhu akaremara.
Huwandu hwerubatsiro urwu ndi430,27 euros uye inogamuchirwa kwemwedzi inosvika gumi nerimwe. Kupfuura nguva iyoyo zvaizodikanwa kutsvaga dzimwe nzira.
Rubatsiro rwevanhu vanopfuura makore makumi mana nemashanu ekuberekwa
Kana munhu asvika pamakore makumi mana nemashanu ezera uye asingashande, mukana wekudzokera kumusika wevashandi unonetsa zvakanyanya kupfuura kune vechidiki. Naizvozvo, pane irwo rubatsiro.
Rutsigiro kuti ugone kuunganidza rubatsiro. Asi kune izvi, zvakateedzana zvezvinodiwa zvinofanirwa kuzadzikiswa, senge iyo kunyoreswa semunhu anotsvaga basa kweinenge mwedzi mumwe mushure mekupedza mari yekubatsira, asina kuramba kupihwa basa uye asina kuramba kuita chero dzidziso.
Mari inowanikwa haifanirwe kudarika 712.50 euros.
Kana iwe ukasangana nezvinodiwa, iwe unokwanisa kuwana urwu rubatsiro. Ehe, iwe uchachaja 430 euros pamwedzi uye chete kwenguva yakanyanya yemwedzi mitanhatu.
Rubatsiro mushure mekushomeka kwevanhu vanopfuura makore makumi mashanu nemaviri ekuberekwa
Ruyamuro urwu rwanga rwuri mune post-kurwisa rubatsiro kwenguva yakati, asi rwakapihwa kune avo vanopfuura makore makumi mashanu nemashanu ekuberekwa. Zvisinei, makore mashoma apfuura yakadzikiswa kusvika pamakore makumi mashanu nemaviri. Nezve izvo zvinodiwa, pamusoro pezera, zvakafanira kusangana zvakafanana sekunge iwe waifanira kuwana mupiro wekusiya mudyandigere. Chii chimwe, Unofanirwa kunge usinga shande uye wakanyoreswa neSEPE, usina mari yako uye wapedza zvimwe zvakanaka.
Nezve huwandu, rubatsiro rwe80% rwunotambirwa kubva kuPublic Indicator yeMwedzi Yekuwanda Mhedzisiro Mhedzisiro (IPREM) uye ichachengetwa kudzamara wawana basa kana kusvika wapinda mudyandigere (kureva kuti, kubva pamakore makumi mashanu nemaviri kusvika pamudyandigere. zera).
Mune ino kesi, iyo yekushaikwa kwebhenefiti inogona kukumbirwa chete kana paine vanovimba nemhuri, uye zvakare iyo yekushaikwa kubatsirwa yapera. Kuti uite izvi, pamusoro pekunyoreswa semunhu anotsvaga basa, haugone kuramba chero kupihwa basa kana kosi yekudzidzira. Mari yemhuri haigone kudarika 75% yemubhadharo wepasi pekudyidzana uye zvakakosha, uye nekuda kweichi chikonzero tinoisimbisa, chokwadi chekuti bhenefiti yemupiro inofanira kunge yapera.
Semutemo, rubatsiro rwunounganidzwa kwemwedzi gumi nemasere, asi maererano ne18 mu6, Kunze kwekunge ivo vasingashande vari pasi pemakore makumi mana nemashanu ekuberekwa nevanovimba nemhuri avo vakaneta (zvinopa) kushaya basa kweinotora nguva yemwedzi mitanhatu. Mune ino kesi, iyo inguva ndeye 45 mwedzi.
Nguva imwechete sekunge ivo havashande pamusoro pemakore makumi mashanu nemashanu ekuberekwa pamwe nekuneta kwekubatsira kwemwedzi inosvika mina uye nebasa remhuri.
Panyaya yevasina basa vane mabasa emhuri uye vanopfuura makumi mana nemashanu, asi ndiani achapedza mari yekushaikwa kwemabasa kweinenge mwedzi mitanhatu, pachave nemwedzi makumi matatu yebhenefiti iyi.
Iwe uchagamuchira ma451.92 euros pamwedzi.
Kunoshamisa kushaya rovha kubatsirwa (SED)
Iyi yekubatsira ye431 euros pamwedzi, kwenguva yemwedzi mitanhatu, inopihwa kune venguva refu vasingashande. Kugona kuikumbira, unofanirwa kunge watopedza basa rekushaya basa, uye uchifungidzirwa kwenguva refu usinga shande (ndokuti, kuva nemazuva anodarika mazana matatu nemakumi masere nemazana masere anyoreswa semunhu anotsvaga basa mumwedzi gumi nesere usati waisa chikumbiro .
Solo inopihwa kuvanhu vane vanovimba uye zvinodikanwa kuti hapana mari, kana zvirinani kuti haapfuure 75% yeSMI.
Imwe rubatsiro mushure mekushaya basa
Pamusoro pekubatsira kwatataura, chokwadi ndechekuti kune zvimwewo zvinobatsira mushure mekushaya basa, zvisinganyanyo kuzivikanwa, asi zvichingoshanda.
Rutsigiro rwemari isina kukwana.
Rubatsiro kune vashandi vepamba.
Rutsigiro rwevashandi vechibvumirano chenguva pfupi.
Vanodzoka vanopinda vanopfuura makore makumi mashanu nemashanu ekuberekwa.
Rubatsiro kubva kumakanzuru emadhorobha uye maAuto Akazvimirira
Rubatsiro kubva kumaNGOs (Cáritas, Red Cross ...).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » General hupfumi » Basa » Batsira mushure mekushaya basa
Car inishuwarenzi ine kana isina kuwandisa